UDouglas A_20 Inzuzo
umbuzo UDouglas A_20 Inzuzo
iinyanga 1 kunyaka 3 eyadlulayo #809 by frederi350
Ndikhuphela i-Douglas A_20 I-Havoc emva kokunqamula zonke iinkcukacha zokhuseleko lwekhompyutha (i-Norton kunye ne-Akhawunti ye-Akhawunti yomsebenzisi). Ukukhuphela kunye nokufakwa apho uphumelele. Emva kokulayisha i-FSX Andizange ndiyifumane iHover kwiWindows Window Selection. Ndisebenzisa i-FSX Booster 2013-Version 2.9 ukuqala i-FSX kwaye ndizama ukuqala i-FSX ngaphandle kokusebenzisa i-Booster 2013. Ndaphinda ndazama ukuvuselela kwakhona. Emva koko ndazama ukuphinda ndilayishe iFSX Flight Simulator Deluxe Edition kwiDisk disk isebenzisa isici seSondlo. Ndine-FSX elayishiwe kwiD yam: idiski yedatha ayikho i C: idiski yendawo kwiFayile yeNkqubo (x86) / iMicrosoft Games. Ndakuzama kwakhona ukubuyisela amaxesha amaninzi usebenzisa ukufakwa ngokuzenzekelayo kunye nokufakwa koMntu. Akukho nto endiyenzayo ibonakala ifuna ukukhuphula i-Douglas A_20 Inqaku kwiWindows Window Selection.
Inkqubo: Intel (R) Core (TM) i7 4790K CPU @4.00 GHz
I-Memory (RAM): I-16.0 GB (i-15.9 isebenziseka)
Uhlobo lwenkqubo: I-64 -bit System Operating System, i-proxy-based xXUMUMX
Bonisa iApporters: NVIDIA GeForce GTX 970 kunye ne-Intel (R) Iimpawu ze-4600